Nhau dzeBhaibheri: Madzidzisire Anoita Jesu - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Rimwe zuva Jesu anoudza mumwe murume kuti anofanira kuda muvakidzani wake. Murume anobvunza Jesu kuti: 'Muvakidzani wangu ndiani?’ Eya, Jesu anoziva chinofungwa nouyu murume. Murumeyo anofunga kuti vanhu vedzinza rake bedzi norudzidziso ndivo vavakidzani vake. Nokudaro ngationei kuti Jesu anotaurei kwaari.
Dzimwe nguva Jesu anodzidzisa nokutaura nhau. Ndozvaanoita zvino. Anotaura nhau pamsoro pomuJudha nomuSamaria. Tatodzidza kuti vaJudha vazhinjisa havadi vaSamaria. Eya, iyi ndiyo nhau yaJesu:
Rimwe zuva kwaiva nomuJudha aiburuka gomo nomumugwagwa aienda Jeriko. Mbavha dzakamusvetukira. Dzakatora mari yake ndokumurova kusvikira odokufa.
Gare gare, muprista wechiJudha akasvika nomumugwagwawo. Akaona murume arohwa. Unofunga kuti akaitei? Eya, akangotsaukira mhiri kwomugwagwa ndokupfuurira kuenda. Tevere mumwe munhu worudzidziso kwazvo akasvikawo. Aiva Murevhi. Akamira here? Aiwa, haana kumirawo kuti agobetsera munhu arohwa. Ungaona muprista noMurevhi mudaro vachidzika nomugwagwa.
Asi ona uyo ari pano nomurume arohwa. MuSamaria. Ari kubetsera muJudha. Ari kuisa mushonga pazvironda zvake. Pashure pacho, anoenda nomuJudha kunzvimbo kwaangazorora ndokunaya.
Apedza nhau yake, Jesu anoti kumurume akamubvunza mubvunzo: 'Ndoupi wavatatu ava waunofunga kuti akaita somuvakidzani womunhu akarohwa? Aiva muprista, Murevhi kana kuti muSamaria here?'
Murume anoti: 'MuSamaria. Aiva netsitsi kumurume akarohwa.'
Jesu anoti: 'Zvakanaka. Nokudaro chienda undobata vamwe sezvaakaita.'
Haudi madzidzisire aJesu here? Tingadzidza zvizhinjizhinji kana tikaterera zvinotaurwa naJesu muBhaibheri, hatingagoni here?
Mumwe murume anobvunza Jesu mubvunzo upi, uye nei?
Pane dzimwe nguva Jesu anoshandisei pakudzidzisa, uye tatodzidzei nezvevaJudha nevaSamaria?
Munhau inotaurwa naJesu, chii chinoitika kumuJudha ari kufamba munzira achienda kuJeriko?
Chii chinoitika muprista wechiJudha nomuRevhi pavanopfuura nomunzira yacho?
Mumufananidzo, ndiani ari kubatsira muJudha akuvadzwa?
Jesu apedza nhau yacho, anobvunza kuti chii, uye murume wacho anopindura sei?
Verenga Ruka 10:25-37.
Pane kupindura zvakananga, Jesu akabatsira sei mumwe murume anoziva Mutemo kuti afungisise pane imwe nyaya? (Ruka 10:26; Mat. 16:13-16)
Jesu akashandisa sei mienzaniso kuti akurire rusaruro pavateereri vake? (Ruka 10:36, 37; 18:9-14; Tito 1:9)
Jesu anoshandisa sei mufananidzo wemuSamariya akanaka kudzidzisa chidzidzo chinokosha?
Zvidzidzo zvipi zvatinowana pamufananidzo waJesu wemwanakomana akarasika?